सरकारको खोप अभियान कहाँ पुग्यो ? – Ketaketi Online
January 29, 2022 January 29, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on सरकारको खोप अभियान कहाँ पुग्यो ?
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा देशमा अठार वर्ष माथिका लक्षित जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा र ८३ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । चार करोड २० लाख ८९ हजार ५४० मात्रा खोप विभिन्न विधिबाट प्राप्त भएको र तीमध्ये तीन करोड छ लाख चार हजार १५२ मात्रा प्रयोग भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खोप अभियान शुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानले दोस्रो तथा तेस्रो लहरमा हुनसक्ने निकै ठूलो जोखिमलाई कम गर्न सकिएको बताउनु भयो ।